Advertise on The Zimbabwean – Advertising Rates
Advertise today on The Zimbabwean
Get The Zimbabwean advertising rates and reach your intended audience.
The Zimbabwean offers a unique combination of publication dates that can benefit your strategy and help you achieve marketing success at great newspaper advertising rates.
Here are reasons why you should advertise on The Zimbabwean
The Zimbabwean has a team that carries more experience and knowledge in the Advertising industry, The Zimbabwean has been involved since the early days of newspaper advertising and has experience helping advertisers reach their target audience at an affordable newspaper advertising rates in South Africa.
Book an advert space in The Zimbabwean, one of our experienced consultants will contact you shortly and also help you understand how much it costs to advertise on Newspaper in South Africa.
Call us today for The Zimbabwean rate card on Newspaper Advertising.